Atụmatụ dị irè maka Omni-Channel Communication | Martech Zone
Kedu otu esi efunahụ onye ahịa gị? Na-enye ahụmịhe na-ekwekọghị ekwekọ, leghara ha anya, zigara ha onyinye na-adịghị mkpa? All oké echiche. Ndị ahịa gị ga-agbanwe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji chọta ọrụ ndị ahịa ka mma, ma n'oge a ndị mmadụ na-adabere nyocha dị n'ịntanetị dị ka okwu ọnụ ọhụrụ.
Olee otú ị na- ahịa? Ma ọ bụghị nanị na-ejigide ha, ma na-akwalite iguzosi ike n'ihe nye ụdị gị? Mgbe ndị ahịa chere na ụlọ ọrụ gị na-elekọta gị, ha na gi gakwuoro. Ebumnuche bụ inye ezigbo ọrụ ndị ahịa na-agbanwe agbanwe, gafee nyiwe niile nke azụmahịa gị.
Mana ndị isi na ndị njikwa azụmaahịa maara na nke a dị mfe ikwu karịa eme. Kwesiri ngwaọrụ iji nyere gị aka ịnye ụdị ọrụ ahịa na-agbanwe agbanwe, nke dị elu nke ga-ebugharị azụmahịa gị. I choro Nkwurịta okwu ọwa Omni; ngwá ọrụ nke oge a nke na-eme ka ahụmịhe na-enweghị nhịahụ maka mmekọrịta ọ bụla nke ndị ahịa site na mmalite ruo na njedebe.
Iwulite Iguzosi Ike n'Ihe Banyere Ndị Ahịa na E-Azụmaahịa Elu nke Taa
Onye ọ bụla na-azụ ahịa na-aghọta na njikwa mmekọrịta dị aghụghọ. Egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ na-eme ka nrụgide na-ewu akara gị ka ndị ahịa mara ya ma dọta ya na akụkọ gị. Enwere ụfọdụ ụzọ dị mma iji nyere gị aka ime nke a.
Jiri Omni-channelụ nkwukọrịta nke ndị ahịa gị ma wuo ezubere iche mkpọsa ahịa maka ngalaba ndị ahụ. -arụ ndị ahịa gị n'oge kwesịrị ka ụlọ ọrụ gị wee hụ ha ma jiri ha kpọrọ ihe.
1. Nkeji Ndị Ahịa gị
Ekekọrịta ndị ahịa gị na-eme ka ihe niile dị mkpa ahaziri ịzụ ahịa kwere omume. Mgbe ị na-agba ọsọ ahịa ahịa dị mkpa ma dị mkpa, ịnwere ike ịbawanye gị ahịa 'ndụ uru ma wulite iguzosi ike n'ihe. E nwere ụzọ anọ dị iche iche ndị ahịa gị:
Geographic (ebee ka ha nọ?)
Oha mmadu (onye ha bu? Gender, age, income)
Psychographic (ndị ha bụ n'ezie? Persondị mmadụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya)
Àgwà (mmefu ego, ụdị iguzosi ike n'ihe)
Site na iji akpaaka AI kwadoro, ị nwere ike ịga niche dịka ịchọrọ na nkewa gị, yana kpokọtara data bara uru gbasara ndị ahịa gị na ndị ọbịa.
2. Hazie Nkwukọrịta Gị
Ndị ahịa chọrọ ịma na ha dị gị mkpa. Ha choro nkwukọrịta okwu na otu, na nyocha gosiri na ha dị njikere ịgbanwe data nkeonwe ha maka ya.
Mgbe ị na-eji ngwá ọrụ ọgbara ọhụrụ kpokọta data gbasara usoro ịzụ ahịa na omume ndị ahịa, ị nwere ike ịnye ụdị ahụmịhe ahaziri iche nke ga-atọ ndị ahịa gị ụtọ. Atụmatụ gụnyere:
Inye oge nsogbu machie mgbe ndị ọbịa gbalịrị ịhapụ saịtị ahụ
Na-enye onyinye onyinye dabere na omume ịzụ ahịa nke onye ahịa ọ bụla
Na-ewetara ihe dị iche iche ụgbọ ala agbahapụ dị ka ihe ncheta nye onye ahịa gị banyere ebe ha kwụsịrị
Ma enwere ọtụtụ ndị ọzọ nhazi nke onwe. Mmezi na-aga n’ihu na ngwanrọ ngwanrọ ịre ahịa nwere ike inyere azụmahịa gị aka ịnye azịza kachasị ike maka mkpa ndị ahịa. Teknụzụ AI nwere ike inyere gị aka ịghọta na ịkọ omume ịzụrụ, ịkekọrịta data, ma kụziere ndị ahịa banyere ụdị gị - na-aga n'ihu. Nye ha ihe ha chọrọ tupu ha na-arịọ maka ya!
3. Na-ekwurịtanụ Okwu na Oge Kwuru
Lee ụfọdụ ụzọ ị ga - esi jiri ọkọlọtọ rụọ ọrụ nke ọma:
Na-ekwupụta…! Chetara ha ozi bara uru (dị ka Mbupu n'efu) n'otu oge dị mkpa na usoro ịzụta.
Nanị. Ezigbo mmasị na akwụkwọ ozi email nke ika gị ma ọ bụ nkwupụta ọkwa. Mee ka ndị ahịa gị chọọ ịnọ 'Ndepụta' ahụ.
Bulie osisi ndị ahụ. Tinye mgbali ịzụta site n’igosi onye ọzọ na-ele ma ọ bụ na-azụ otu ihe ahụ ugbu a.
Ike Uto site Technology
Site na sọftụwia nkwukọrịta nkwanye ugwu niile nke AI, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa mara mma. Njirimara dịka Nlele Ndị Ahịa Nanị, Ihe Nlereanya Zuru Ezu, na ntanetị Web (ntanye na saịtị) nwere ike inyere aka mejupụta usoro ahịa gị.
Otu Ndị Ahịa Na-ele
O siri ike idobe mmekọrịta ndị ahịa niile gafere na ntanetị dị iche iche. Site na mkparịta ụka ọwa niile, njikọ ndị ahịa gị niile na-esoro - site na email, na ekwentị, site na mgbasa ozi mmekọrịta, na ọbụlagodi ihe omume mpaghara - n'otu ebe.
The Otu Ndị Ahịa Na-ele (ma ọ bụ SCV) na-egosipụta profaịlụ data njirimara gị. Nkọwa ọ bụla nwere ọrụ saịtị nke ndị ahịa ahụ, mmasị ngwaahịa, akụkọ ịzụta, na ndị ọzọ. Inwe data bara ụba niile n'otu echiche na-enye ohere maka nkewa pụrụiche na mgbasa ozi ezubere iche.
Jide n'aka na SCV gị na-enye mgbanwe, scalability, na mmelite na ezigbo oge, yabụ ị nwere ike ịnye ahụmịhe ndị ahịa kachasị mkpa ma baa uru.
Ihe ngosi zuru ezu
Mgbe á »na-abá» ‹a ijikwa gá» ‹nkewa azum azum azum, akpaaka bá» key isi. Tọọ ntọala nkwukọrịta dabere na ọnọdụ ahaziri iche, ma hụ na itinye oge na ndị ahịa ọ bụla.
Lee ụfọdụ di na nwunye akpaaka:
Ekele diri ndị niile debanyere aha email
A webhook nke na-eme ka ị mara oge ọ bụla mmadụ lere anya na ụlọ ahịa gị
Atụmatụ dị omimi
Ebumnuche na echiche ndị a niile dị mma, mana ka anyị nyocha nke ọma wee chọpụta ụzọ ndị bara uru iji jiri nkwukọrịta ọ bụla. Ndị a bụ atụmatụ atọ akọwapụtara iji lee anya:
1. Ezigbo Email Send Times
Ọ bụrụ na nsonaazụ ahịa email gị na-akụda mmụọ, ọ bụghị naanị gị. Mana enwere ụzọ iji bulite mbọ gị ebe a iji hụ na ị na-eme ike gị niile.
Strategy: Melite email na-akpali ya na-adaba na otu ihe omume, dị ka nnyefe nke ụfọdụ push ngosi. Algọridim ahụ ga-eziga ozi ịntanetị ndị a na-akpaghị aka n'oge kwesịrị ekwesị, na-alọghachite ọnụego email ka mma ma na-etinye ndị ahịa ziri ezi.
2. Mee ka ụgbọ ala a gbahapụrụ ọhụrụ dị ọhụrụ
Na 2016, Business Insider mere atụmatụ na Onu ogugu 2.75 n'ime ngwongwo ịzụ ahịa ịzụ ahịa hapụrụ. Ndi ụlọ ọrụ gị ọ ga-erite uru site na otu nke ahụ?
Strategy: Chetara ndị ahịa gị ihe ha hapụrụ site na email, gbasoro ihe dị ka otu awa mgbe ha mechara mmekọrịta ikpeazụ. Gụnye ndepụta nke ihe ndị dị na ụgbọ ala ha yana ọkpụkpọ oku iji rụọ ọrụ. Nke a bụ usoro dị mgbagwoju anya ịtọlite ​​mana ọ bara uru na nsonaazụ siri ike.
3. ROPO: Nchọpụta Ntanetị, Offzụta Ihe Na-adịghị n'ịntanetị
Site na ahịa e-commerce na-aba ụba ọ nwere ike isiri gị ike ikwere na 90% nke ahịa US ka na-eme n'onwe. Maka ụlọ ọrụ nwere ụlọ ahịa ọ dị oke mkpa ijikọ ụwa ha n'ịntanetị na brik na-ngwa agha iji chekwaa ma jiri ego nweta ozi ndị ahịa.
Usoro: Bido usoro mmemme nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa nwere ike iji na ụlọ ahịa nke jikọtara profaịlụ na data ha n'ịntanetị. Ugbu a ị nwere ike ikpokọta omume ha n'ịntanetị na akụkọ ihe mere eme n'ịzụ n'ịntanetị. Nweta profaịlụ onye ahịa zuru oke, tinye ha na mkpọsa ahịa gị ezubere iche, mekwuo ahụmịhe ha site na iji onyinye pụrụ iche, ma kwalite ntụkwasị obi ndị ahịa niile dị mkpa.
Ọ dị mkpa maka azụmaahịa ọ bụla ka ọ dịrị mkpa, yana ngwa ọrụ sọftụwia ịdebe ụlọ ọrụ gị n'ihu usoro ahụ bụ AI. Nkwukọrịta ọnụ ụzọ Omni na-enye gị ike ịme ndị ahịa gị ihu site na ịhazi onwe ha, akpaaka na ahịa echere. Mee ka uzo a bawanye ndu ha dika nke gi.
Tags: agbahapụ ịzụ ahịaagbahapụ agbahapụezi ndị ahịaemail zipu ogeKpochapụgeographyozi ogeomnichannelahaziri ịzụ ahịascvotu echiche ndị ahịaatụmatụ
M na - eduga ndị otu ọdịnaya na Exponea (sọftụwia ire ahịa niile, na - enyere ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche na ọnụ ọgụgụ), ebe m na - ejikwa mmepụta isiokwu ederede e-commerce na ọmụmụ ihe, yana ọdịnaya maka webinars na ihe omume. Mmasị m bụ ịkọ akụkọ: M na-enyocha mgbe niile ụzọ ọhụrụ na ụzọ okike iji kọwaa isiokwu ndị siri ike. Mgbe m na-anọghị na tebụl m, ọ na-atọ m ụtọ iso ndị agha m na-eme egwuregwu na-egwu egwu, na-ekiri ihe nkiri na igwe onyonyo, ma na-eme atụmatụ maka njem m ọzọ.